विगत वर्तमान र भविष्य प्यान्ट – Shekou Woman
Home › विगत वर्तमान र भविष्य प्यान्ट
साइज २X-सानो २X-सानो एक्स-सानो सानो मध्यम ठूलो एक्स-ठूलो २X-ठूलो
रंग खैरो खैरो काला
हामी डोरीलाई माया गर्छौं, एक सुन्दर टी र एक सुपर प्यारा र एडीजीको लागि प्यारा टी र केही कागजातहरूसँग जोडी।
@Yooldhaintatity मा देखिएको रूपमा
चयनित आकारहरू प्रतीक्षामा छन् र -4--4 हप्तामा जहाजको कारण
बेल्ट सामेल भयो
कम्मर:2...0 सेमी
यी फिट उत्तम! अति नरम, म foot फिट २ र १ 130० पाउण्ड हुँ र म सानो भएँ, कोही पनि म भन्दा अलि कलिलो फिट गर्न सक्दछ। बेल्ट नि: शुल्क पनि आयो जुन कत्ति राम्रो थियो! म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। धेरै न्यानो तर ढीला।
बेल्ट प्यान्टको साथ आउँदछ जुन म अत्यन्त आश्चर्य र खुसी थिए। तिनीहरू धेरै राम्रो र आरामदायक छन्
नमस्ते यी बेल्टको साथ आउँदछन्, म तिनीहरूलाई साँच्चिकै मन पराउँछु तर उनीहरू फोटोमा सुसज्जित प्यारा बेल्टको साथ आएका छन् कि छैन भन्ने कुरामा निश्चित छैन।
मलाई यी प्यान्टहरू एकदम मन पर्यो! मेरो वजन k 44 किलोग्राम हो र म १ 155 सेन्टिमिटर सम्म अग्लो छु, मैले आकार सानो पाएँ र यो एकदमै फिट भयो। तिनीहरू धेरै न्यानो र अद्भुत देखिन्छन्। यसले पेरिस भाइबसमा टाईकोर / कला विद्यार्थी दिन्छ र बेल्ट बाउन्स हो! निश्चित रूपले कसैको लागि सिफारिश गर्दछ। सामग्री पनि शीर्ष खाच छ र यो समय संग रहनेछ!
ओएमजी म यी प्यान्ट्सको साथ माया गर्छु! उनीहरूले 90 ० को वीब छोडिदिन्छन् र पछाडि इलिस्टिक कमरब्यान्ड राखिन्छ जुन मेरो लागि उत्तम छ। म यी प्यान्टहरूको अत्यधिक सिफारिश गर्दछु!
एम्मेली कोच जे।
मलाई वास्तवमा प्यान्टहरू मनपर्‍यो ... तर आकार अलि टाढा छ।
कम्मर वरिपरि राम्रो फिट, मेरो लागि एक लामो लामो किनभने म छोटो छु। सामग्री पर्याप्त राम्रो छ।
राम्रोसँग फिट हुन्छ। स्ट्रेचि कपडा। उत्तम लम्बाई
मलाई यी मन पर्छ! म 4--6, १२7 पाउन्ड र २-2-२7 कम्मर र एक सानो फिट उत्तम। प्यान्टको पछाडि लोचयुक्त ब्यान्ड छ त्यसैले निश्चित रूपमा यी यीहरू सम्भवतः एक आकार माथि वा एक आकार तल फिट हुनेछन्। आरामदायक र राम्रोसँग धोइन्छ, फोटो धुने पछि लिइएको थियो। लम्बाई खुट्टाको माथि मात्र म माथि छ, जे होस् 5'' i त्यसैले यो लम्बाई gal को लागी आदर्श हुन सक्दैन जब सम्म तपाईं capris खोज्दै हुनुहुन्छ। यी तिघ्रा र बाछोको माध्यमबाट एक आरामदायी फिट हो (जुन महान बीसी थियो म मोटो फिला हो) सुपर प्यारा कफ पनि। मलाई खुशी लाग्यो कि मैले यी पाइन!
राम्रो सामग्री। म आकार १० युके हुँ र सानो ठूलो फिट हुन्छ, कम्मरको पछाडि इलिस्ट्याटेड छ
म यसलाई केवल stars तारा दिन्छु किनकि मेलमा २ महिना लाग्यो आउनको लागि, तर तिनीहरू अति राम्रो छन् र तिनीहरू राम्रोसँग फिट छन्! कम्मर मा लोचदार फिट मद्दत गर्दछ तर पनि बेल्ट द्वारा लुकेको छ। राम्रो सामग्री। निश्चित रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्!
लवली र c्ग, राम्रो लोचयुक्त कम्मर, एकदमै बस्दछ। खुट्टा एकदम छोटो छ तर अझै राम्रो देखिन्छ। उत्तम र .्ग
धेरै राम्रो आइटम, जो म शरदमा लगाउनको लागि कुर्दिन सक्दैन! बेल्टलाई समतल हुन केहि समय चाहिन्छ, तर विश्वास छ यो अन्तमा धेरै राम्रो देखिनेछ। अनौंठो टुक्रा जुन मेरो धेरै पुरानो माथि र बुटहरूको साथ जोडी गर्दछ।
प्रेममा यी प्यान्टहरू सुपर स्टाइलिश छन् र म तिनीहरूलाई मन पराउँछु
मनपर्ने प्यान्टहरू! पोशाक गर्न वा तिनीहरूलाई कारण लगाउन सक्छ! गम्भिर रूपमा मेरो स्वामित्वको उत्तम प्यान्टहरू
तिनीहरुलाई माया गर! म खुसी धेरै खुशी! तिनीहरू सुपर चापलुसी छन् र केहि संग जाने